Xulafadii Villa Somalia: Eritrea Oo Qatar Ku Eedeysay Kicin Dadweyne iyo Kharbudaad – Goobjoog News
Xulafadii Villa Somalia: Eritrea Oo Qatar Ku Eedeysay Kicin Dadweyne iyo Kharbudaad
in Gobalada, Wararka Dalka, Warbixin Gaar ah
Dalka Eritrea ayaa qoraal uu maanta oo khamiis ah soo saaray waxaa uu ku eedeeyey dalka Qatar in Dooxa ay dalkooda ka waddo kicin dadweyne iyo kharbudaad dhinac walbo ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea waxaa ay leedahay Qatar markii ay ku guuldareysatay dhibaatadii ay ka soo wadday dhanka bariga Suudaan ayey gudaha dalka ka bilowday fulinta 10 qodob oo kharbudaad iyo dhibaato ah.
Qodobada ay Eritrea ku eedeysay maamulka Tamiim waxaa ka mid ah : Abuuris fitno xagga diinta ah, kicin dadweyne gaar ahaan dhalinyarada, abuurista amni darro iyo degenaanshiyo la’aan dalka ah iyada oo la shirqoolayo, lana dilayo dad muhiim ah.
Waxaa kale oo ka mid ah; Mideynta mucaaradka Eritrea, in hanti siiso jamciyaad dhibaato wada, kicinta muslimiinta Eritrea, in dadka dalkaasi loo kala qeybiyo isir kala sooc, boorinta dibad baxyo ka dhan ah dowladda, faafinta daacayadaha in Eritrea ay ka dhacaan arrimo ka dhan xuquuqul insaanka iyo weliba tababarka kooxo dil geysta.
April sanadkan ayey Eritrea sheegtay arrimo la mid ah qodobadan ay ku heysato dalka Qatar, laakin waxaa muuqato in maamulka Tamiim sii wado.
Dalka Qatar oo hoy u ah kooxo badan oo Islaamiyiin ah waxaa xiriirka u jaray dalal badan oo Khaliijka iyo Carabta kala ah, waxaana lagu eedeeyey in maamlgelin iyo gabbaad siiyo argigixisada.
Labada dal waxaa ay xiriir soke la leeyahay maamulka hadda jooga Villa Somalia, waxaan la ogeyn in dhexdhexaadin uga bannaan tahay iyo in kale.
Afar Qof Soomaali Ah Oo Ku Geeriyootey Dab Ka Kacay Minneapolis
Madasha Xisbiyada Qaran oo Weerartay Itoobiya Una Digtay AMISOM
Xibiga Wadajir Oo Ka Digey Faragelinta Ciidanka Itoobiya Ee Galmudug Iyo Jubbaland